dailynews.blaogy | 2
dailynews | 20 Janoary, 2007 02:37
Ny fiainana kristiana | Rohy maharitra | Hevitra (4) | Verindrohy (trackback) (0)
dailynews | 15 Janoary, 2007 04:01
Efa hariva ihany ny andro t@ izay. Nitsofoka t@ parking moramora aho fa saika hanajanona ny tomobilina noentiko. Nony nitsofoka tao anefa aho dia taitra sy nangovitra nony tonga saina fa teo anelanelan ny tomobilina izay nijanona teo, izay marihina fa mainty daholo ny lokony dia nisy fatin olona telo nivalampatra teo @ godorao.
dailynews | 11 Janoary, 2007 17:22
Ny baiboly dia milaza fa toetra fito no maha Mpanjaka ny mpanjakako… mpanjakan ny jiosy Izy; mpanjaka @ alalan ny fihaviana izany… Mpanjakan Israely Izy; mpanjaka @ alalan ny firenena izany… Mpanjakan ny fahamarinana Izy …Mpanjakan ny fotoana rehetra Izy ..Mpanjakan ny lanitra Izy..Mpanjakan ny voninahitra Izy…. Mpanjakan ny mpanjaka Izy ary Tompon ny tompo. Izany no mpanjakako. Manontany tena aho hoe..fantatrao ve Izy? Davida dia nilaza fa “ Ny lanitra manambara ny voninahitr Atra ary koa mampiseho ny asan’ ny tanany”. Ny mpanjakako dia mpanjaka tsitohaina. Tsy misy azo hamarana ny fitiavany tsy manampetra. Tsy misy teleskopy izay afaka hahitana ny moron ny fiahiany ahy izay tsy hita noanoa. Tsy misy fefy izay afaka manakana Azy tsy handrotsaka ny fitahiany. Maharitra ny heriny…mahatoky tanteraka Izy… tsy voahozongozona mandrakizay Izy…tsy ho faty mandrakizay ny fahasoavany. …lehibe ny heriny…tsy manampaharoa ny fihantrany….. fantatrao ve Izy?
Izy no tranga lehibe indrindra izay nandalo ny faravodilanitr ity izao tontolo izao ity. Zanak Atra Izy…Mpamonjy ny mpanota Izy…Izy no ivon’ ny sivilizasiona….mitsangana @ maha-Izy Irery Azy Izy… lehibe Izy…Tokana Izy…tsy manampaharoa Izy…tsy misy ny teo alohany….Izy no hevitra ambony indrindra @ literatiora…..ny maha Izy Azy no avo indrindra eo @ filozofia…Izy no olana goavana indrindra @ fitsikerana izay lehibe indrindra…Izy no fototry ny fampianarana marin ny ny teolojia…...Izy no kardinaly ilaina indrindra ho an ny finoana..Izy no fahagagan ny fotoana rehetra.. Izy no ambony indrindra @ izay rehetra tsara tianao hiantsoana Azy….Izy irery ihany no mahasahana ny toetra rehetra ananan ny hoe mpamonjy mahefa…manontany tena aho raha fantatrao Izy androany?
dailynews | 08 Janoary, 2007 18:22
1)Mila marina eo anatrehan Atra satria tsy ny olona rehetra no valiany vavaka:
Fanina ny olona matetika hoe maninona no tsy mety mahita valimbavaka mihitsy ary maninona no tsy mihaino Atra nefa izy mba mivavaka ihany. Toa mivavaka ihany, toa mitomany ihany, toa misentosento ihany anefa ilay vavaka tsy tonga tetsy @ plafond akory dia miverina..hmmmm… Sao kosa ary dia mbola nisy ny fahotana izay tsy nifonana na fahotana nankasitrahana tany ho any ka mbola tsy nibebahana? Atra mantsy niteny fa raha misy izany dia izany no efitra manasaraka antsika Aminy ka dia tsy mihaino tsotra fotsiny izao Izy.
Jao 9:31=.Fantatsika fa Atra tsy mihaino ny mpanota ; fa izay mivavaka aminy sy manao ny sitrapony no henoiny.
Isa 59: 1-2=> Indro ny tanan I Jehovah tsy fohy, fa mahavonjy, ary ny sofiny tsy lalondalovana fa mahare fa ny helokareo no efitra mampisaraka anareo @ Atrareo, Ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo, ka dia tsy mihaino Izy.
Jak 5: 16=> Ny fiasan ny fivavaky ny marina dia mahery indrindra.
Oha 10:24=> Ny tahotry ny ratsy fanahy hihatra aminy fa ny irin ny marina no homena azy.
2) Mila mangataka :
Marina tokoa fa efa fanatr Atra izay zavatra ho ahy anefa Izy ihany koa dia nampirisika ny kristiana hangataka. Miandry ahy izany Izy hanokatra ny vavako ary hilaza aminy ilay Raiko hoe inona no zavatra izay tiako hangatahina Aminy.
Lio 10:9-10=> Mangataha dia homena ianareo; dondony dia hovohana hianareo. Fa izay rehetra mangataka no mahazo; ary izay mitady no mahita, ary izay mandondona no hovohaina.
Mat 7:7=> Mangataha dia homena hianareo, mitadiava dia hahita ianareo, dondony dia hovohana ianareo.
dailynews | 28 Desambra, 2006 20:38
Hebreo 11: 1=> ny finoana no fahatokisana ny @ zavatra antenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita.
Ny tsotra indrindra hahazoako ny atao hoe finoana an Atra dia Mino fa misy Izy ary mino izay lazainy ao anaty baiboly.
Mino fa misy Izy
Heb 11:6=>“..fa izay manantona an Atra dia tsy maintsy mino fa misy Izy ary mpamaly soa izay mitady Azy”
Mila mitandrina eto fa ny devoly ihany koa dia mino ny fisian Atra, izy ireo aza hono sady mino ny fisiany no mbola mangovitra Jak 2:19=> Hianao mino fa iray ihany no Atra; koa tsara izany ataonao izany, ny devoly koa mba mino izany ka dia mangovitra. Isika moa indraindray dia mbola resin ny finoan ny devoly satria tsy mino tsotra fotsiny izao fa misy Atra. Ny finoan ny devoly an Atra anefa dia marihina fa finoana tsy mahavonjy. Mahafantara tsara izy fa misy Atra ary Atra dia masina, saingy kosa tsy misy hiantraikany @ fiainany izany, efa fahavalon Atra izy na hiodinkavia na hiodinkavanana. (Mark1: 24)
Mino izay lazainy:
Ny finoana olona iray dia tsy eo @ stage intsony hoe mi-existe izy, fa efa eo stage manaraka hoe: mino izay lazainy ve?
Ny finoan I Abrahama an Atra, izay lazain Atra fa rain ny mpino, dia nino tsotra fotsiny izao izay lazain Atra na inona na inona situation teo @ fiainany.
TA: avy @ Isaka no antsoina ny taranaka ho anao(Gen 21: 21)
Situation: atao fanatitra Isaka ary ho faty izany.
Finoan I abrahama: tsy nimenomenona izy hoe ho vonoina isaka ary Atra manao omeko tsy omeko fa ny fantany dia hoe avy @ Isaka no antsoina ny taranaka ho azy na inona na inona no mitranga androany @ Isaka. Nino aza izy araka izay mba saina kely fantany hoe: na maty aza isaka dia mbola mahay manangana ny maty Atra, fa ny ninoany fotsiny dia ny teniny.( Heb11: 19) dia rehefa nino an Atra izy dia niseho ny voninahitr Atra, tsy Isaka no natao fanatitra hodorana fa zavatra hafa ary noho izany ny taranaka antsoina avy @ Isaka dia ho tanteraka.
Mbola be dia be ireo olon ny finoana resahina ao @ Hebreo 11(vakio)
Ohatra mba tiako izy ity ary ampiasaiko foana.
Nilaza I DN fa homeny vola 200 Ariary Soa @ faran ny volana. Raha mino an I DN I Soa dia mino izy fa homen I DN 200 Ar @ faran ny volana ary rehefa tonga izany fotoana izany dia hiandry izany tsy ampisalasalana satria efa nahazo fampanantenana. Mino an I DN izy izany satria mino izay lazainy. Fa tsy hoe milaza fa mino an I DN izy anefa nony tonga ny faran ny volana dia nilaza hoe: dain, DN koa ve dia hahaloa ny volako eo…hmmm..raha mino izy dia hino tsotra fotsiny izao fa ho azony ilay 200 AR. Tsy ny fisian I DN intsony no takiana hinoany eto fa ny teniny fampanantenany.
Voasoratra ao anaty baiboly ny tenin Atra. Raha mino an Atra aho izany dia tsy tokony hijanona eo @ finoana fotsiny ihany fa hoe misy Izy. Fa kosa mino ny teniny dia tsy inona fa izay voasoratra rehetra anaty baiboly.
Misy fatra ny finoana:
Misy ny kely finoana: Jesoa dia niteny mafy ireo mpianany matetika hoe ry kely finoana (Matio 8:26)
Misy ny be finoana: ny finoan ilay miaramila manamboninahitra, tsy mbola nahita olona be finoana tahaka izany aho hoy Jesoa(Mat 8:10)
Raha misy fatra ny finoana dia midika izany fa azo ampitomboina izy izany fa tsy tokony hijanona ho kely finoana foana satria dia hita eto fa ny be finoana no ankasitrahin I Jesoa.
Ahoana no hahazoana na hampitomboina finoana?
Rom 10:17=> Koa ny finoana dia avy @ torinteny ary toriteny avy @ tenin I Kristy.
Raha te hitombo finoana dia mila mihaino toriteny betsaka. Satria araka ny hahenoana toriteny no mapahatanjaka ny olona iray. Tadidio ilay ohatra hoe soavaly fotsy sy soavaly mena tao @ lahatsoratra “ Rehefa Avy Teraka Indray” Rehefa novokisana ny fiainampanahy dia miha matanjaka ilay soavaly fotsy . Raha ilay soavaly mena kosa no vokisana dia miha matanjaka ny fiainana ara nofo ary miha reraka kosa ny soavaly fotsy dia ilay fianana ara panahy izany. Koa izay nahazo sakafo betsaka ihany izany no mandresy rehefa mihazakazaka ireo soavaly roa ireo.
Koa raha te ho be finoana dia mihanoa toriteny betsaka, tsy ny lahady na sabotsy ihany fa isanandro. Betsaka ny radio na fandaharana @ tele misy toriteny. Mila mihinana betsaka raha ny ara panahy. Vakio ny baiboly isanandro, mamakia literatiora kristiana, mila mivavaka (eka), mila miandeha miangona, mila mifanerasera @ kristiana namana hafa…
Oahatra iray anaty baiboly anisan ny mba tena tiako tokoa momba ny finoana
Ny tantaran I Simona Petera teny ambony rano: Nony nahita an I Jesoa izy nandeha teny ambony rano dia mba niteny ihany koa hoe: raha hianao ihany io dia mba asaivo manantona anao aho, dia hoy Jesoa hoe “ manantona” dia nandeha teo ambonin ny rano Petera rehefa nidina avy ao antsambokely (Mat 14:28-29)
Teto: tsy nila nino intsony I Petera hoe mi existe Jesoa. Efa teo izy. Fa ny ninoany teto dia ny Teniny hoe: “manantona” teto dia nino ny tenin I Jesoa I Petera izay tenin Atra.
Koa raha te hahita ny voninahitr Atra I Petera, na inona na inona zavatra nitranga. Tsy ny situation no ninoany hoe: oay rano lalina be ange ity e ahoana koa ary izany Jesoa izany, na hoe oay, dia ahoana raha misy voay ao anaty rano ao. Oay dia ahoana koa izao ny fomba handehanako eo, oay sao dia milentika eo aho? Tena tsy ara tsiansa mihitsy izany mandeha ambony rano izany, zany ve dia hinoako??….tsy ny situation no ninoany fa ny TENIN I Jesoa hoe manantona, fa rehefa izay tenin I Jesoa izay no ninoany izay raha jerena @ mason olombelona dia hita fa impossible mihitsy dia niseho ny voninahitr Atra. Teto averina indray tsy ny situation manodidina no ninoany fa ny TA dia nony nataony izany dia niseho ny voninahitr Atra, nahita miracle izy dia ny fahagagana mandeha ambonin ny rano. Izany no finoana mahakasika ny fon Atra.
Tahaka izany ihany koa eo @ fiaianana kristiana. Raha te hahita fahagagana dia aza ny situation no jerena fa ny tenin Atra. Raha miteny Atra hoe hanasitrana aho. Dia aza ny situation androany no jerena hoe: ka ny dokotera anie efa niteny hoe tsy misy azo atao intsony e na hoe ka na ilay aretina aza anie nihombo e.sns….raha te hahita ny voninahitr Atra, raha te hahita fahagagana, dia manomboka ny TA miteny hoe: ny diakapoka taminy no hanasitrananana azy hinoana fa tsy ny tenin ny dokotera hoe tsy hoe tsy misy azo atao aminao intsony na hoe ny fanaintainan ny aretina. Mila mivavaka kosa anefa. Ary tazomy ny TA: izany hoe rehefa mivavaka dia lazao Atra fa tsy noho ianao marary no mahatonga anao mangataka fa noho Izy niteny hoe hanasitrana, dia tazomy @ teniny Izy. Ataovy ny vavaka isanandro ary aza mijanona raha tsy azo ny valimbavaka. Fa raha hinoanao ny Teniny fa tsy ny situation nao dia hiseho ny voninahitr Atra. Mila maharitra mivavaka kosa( zavatra tena ngeza beuh io), aza mitsahatra raha tsy azo ny valimbavaka. Mety ho eo no ho eo ny valiny mety afaka amantaonany, Atra ihany mahafantatra hoe rahoviana fa ny hinoako kosa dia ny teniny hoe raha hino ianao hoy Izy dia ho hitanao ny voninahitr Atra. (Jaona11: 40)
Raha te hahalala betsaka kokoa momba ny ministeran ny fanasitranana sy ny fitondrana fanahy ho an Atra dia jereo ity web site ity fa hahita ianao fa mbola manasitrana Atra na aretina inona na aretina inona h@ izao @ alalan ny mpanompony samihafa. Fa ny olana dia hoe ianao ve mino izany?. http://www.bennyhinn.org/
Tahaka izany ihany koa ny kristiana iray manambady olona mamo lava be ohatra ary tiany io vadiny io hanolo tena ho an Atra ary hiala @ izany toetra ratsy tsy ankasitrahan Atra izany.
Ny tenin Atra dia izao: raha mangataka zavatra araka ny sitrapoko ianao hoy Izy dia ataoko izany. Sitrapon Atra ny mpanota iray hibebaka ary hiala @ ratsy fanaony noho izany sitrapon Atra izany io vehivavy io hivavaka ho an ny vadiny mba hibebaka ilay vadiny( Atra dia niantso ny kristiana hivavaka ho an ny olona hafa hijoro eo anatrehany @ alalan ny vavaka mba tsy handringany io olona io naio firenena io. Resaka intercession Ezek 22:30 Noho izany anjaran ny vady izany eto no mijoro eo anolohan ny banga, manao intercession ho an ilay vadiny mba hiverenany @ Atra)
Minoa an I Jesoa Tompo ianao dia ho vonjena ianao sy ny ankohonanao. (Asa 16:31)
Ary ny vady dia isan ny ankohonana, isan ny fianakaviana.
Ny situation: mamo lava rangahy, tsy mahate ho tia mihitsy, tsy mitondra vola antrano sns…
Iza ary no hinoana, ny TA sa ny situation?
Rehefa manomboka mino ny TA ary mivavaka mba hiova io olona io dia haneho ny vonihahiny Atra. Aza adino foana ny milaza aminy fa noho izy manome Teny hoe: minoa an I Jesoa Tompo dia ho vonjena ianao sy ny ankohonanao sy ny hoe mangataka zavatra araka ny sitrapony no antony hangatahanao.
Ny olana dia raha vao manomboka mamo rangahy sy miteniteny foana sy masiaka..dia manomboka kivy sy manomboka tsy mino intsony fa mbola hiova io olona io. Ny antony dia manomboka mino ny situation ny olona iray fa tsy ny TA milaza hoe raha mino ianao dia ho vonjena ianao sy ny ankohonanao. Mety ho ngeza tahaka ny tendrombohitra tokoa ny situation saingy tadidio fa Atra dia lehibe noho io tendrombohitra be io. Izy aza nilaza hoe raha manana finoana na dia kely aza tahaka ny voatsinapy dia afaka mahafindra tendrombohitra izany( Matio 17:20)
Raiso @ teniny Izy, ary aza variana @ situation fa mandehana @ finoana hoe: Atra no hinoako ny teniny fa tsy ny situation…rehefa mino izay dia mivavaha isanandro mandrapahazo ilay valimbavaka. Ary rehefa mino ny teniny ianao fa tsy mino ny situation dia minoa fa ho hitanao ny voninahitr Atra.
Izay ilay hoe mino:
Fa tsy hoe mino an Atra aho ary averimberina izany isanandro anefa tsy misy hinoana ny zavatra rehetra izay lazainy ao anaty baiboly na zara raha hinoako ary toheriko mihitsy aza….tsy mino izany satria tsy mino ny zavatra nolazainy fa mampandainga Azy raha tsy hinoana.
Misy teny fananarana maro ao anaty baiboly ao momba ny fahafatesana raha mitohy ny fahotana raha tsy hibebahana: ao ny resaka homo, ao ny resaka fangalarana vadin olona, ao ny fahamamoana, ao ny fanompoantsampy, …….Izay marihina fa tsy nifampiaraharaha mihitsy Izy hoe ovaina izany @ izao fotoana izao izao fa efa miova ny toetrandro. Atra tsy miova Izy fa izaho no tokony miova hanaraka izay lazainy fa tsy ny teniny no amboamboariko hanaraka ny filako. Atra fitiavana Izy anefa koa Atra masina. Fa tsy afinafenina foana anaty fitiavan Atra foana ny excuse ny fahotana izay tsy tiana hibebahana.
Ao ihany koa ny ireo teny fikasana (promesses) ao anaty baiboly ao momba ny resaka fianakaviana, fahasalamana, ara bola, zanaka, vady, fianana feno ny Fanahy Masina, fiainambavaka matanjaka, fiainana kristiana taritin ny Fanahin Atra, delivrance @ zavatra izay mamatotra na inona na inona…..
Raiso ny teny fikasana ary hinoy izany fa avy @ Atra ary manomboha mivavaka @ situation izay misy, tsy noho ny situation ananao no antony hivavahanao fa noho Atra nanome teny fikasana. Raiso @ teniny Izy raha zanany ianao ary manao ny sitrapony.
Raha mbola tsy tena sur hoe zanany dia mandehana any @ ilay lahatsoratra voasoratra ato ihany koa hoe “Lalana Mankany Andanitra” ahafantaranao marina hoe inona izany fa important be io. Atra tsinona tsy mamaly vavaka ny mpanota na ny tsy zanany fa izay zanany ihany sy izay manao ny sitrapony.( Jaona 9:31; Isa 59:1-2)